Google dia tsy hanolotra smartwatch vaovao amin'ity taona ity | Androidsis
Betsaka ny tsaho niely manodidina ny Android Wear, izao WearOS, mandritra ny taona. Raha manana fikasana hangatsiaka ny lampihazo i Google ary hiandry fotoana fohy, raha manana fikasana handefa modely eo an-tanan'i Samsung ilay mpikaroka mpikaroka, na nikasa ny hampiseho ny Google Pixel 3 miaraka amin'ireo rindrambaiko vaovao.
Saingy toa nanelingelina ny orinasa ny farany mandiso ny tsaho tsirairay izay nanambarana fa ny orinasa dia niasa tamina smartwatch hanolotra azy tamin'ny 9 Oktobra miaraka amin'ny taranaka fahatelo an'ny Google Pixel sy Pixel XL. Ho an'ny fotoan'ny Pixel Watch na izay hiantsoany farany dia tsy maintsy miandry izy.
Miles Barr, Lehiben'ny injeniera ao amin'ny Google, dia nanamafy tamin'i Tom Guide fa ilay mpikaroka goavambe dia tsy mikasa ny handefa smartwatch eny an-tsena, farafaharatsiny mandritra ny taona sisa, satria araka ny filazan'i Miles, Google dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny asan'ny Android sy ny fanatontosana ilay kinova Android azo ovaina, nantsoina hoe volana OS ho Wear OS, mba hanandramana hisarihana mpampiasa maro kokoa mampiasa sehatra hafa , toy ny iOS.
Smartwatches miaraka amin'ny asan'ny Wear OS, na dia misy fetrany aza dia ampiarahina amin'ny iPhone. Ilay anarana taloha, Android Wear, dia nanolotra fisalasalana maro momba izany, nanery ny orinasa hanova azy io ka ireo mpampiasa iPhone mieritreritra fa tsy azo atao ny mampiaraka dia hamoaka izany hevitra izany ao an-dohany ary handray ireo karazana fitaovana ireo. rehefa mividy smartwatch, tsy mieritreritra manokana momba ny Apple Watch, zavatra tena sarotra raha raisintsika ny kaonty ny fampidirana natolotry ny iOS miaraka amin'ny watch OS, ny rafitra fiasan'ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Google dia tsy hanolotra smartwatch vaovao amin'ity taona ity
HTC dia miasa amin'ny sahaniny manaraka: ho 5G io ary hitondra Snapdragon 855